CAD / GIS-Teaching - Page 5 - Geofumadas
Barashada qalab kombuyuutar ah ayaa noqda mid sahlan maalin kasta, barashada buuxda ee AutoCAD online, blogs, forumyada iyo bulshooyinka isticmaala waxay ku dhow yihiin ku filan inay bartaan hab is barbar socda. Si aad u bartid AutoCAD maahan muhiim inaad haysato liisanka sharci darada ah, ujeeddooyinkan waxaa jira noocyo waxbarasho oo lacag la'aan ah oo ay bixiso AutoDesk, gebi ahaanba ...
Koorso ku saabsan suuqyada aan rasmiga ahayn iyo habaynta
Sidee ayay degsiimooyinka aan caadiga ahayn loo qeexay loona cabiray (cabbirka)? Sidee loo dejiyaa degsiimooyinka aan caadiga ahayn? Maxay yihiin xuduudaha suurtogalnimada (qiimeynta wax-ku-oolnimada) ee barnaamijyada joogtaynta? Maxay yihiin isbeddellada iyo isbeddellada dabeecadaha aan caadiga ahayn ee Latin America? Maxay tahay sababta wax soo saarka aan rasmiga aheyn ...
Koorsada Java si ay uga bartaan xoqidda
Dhowr maalmood ka hor waxaan ka hadlayey suurtagalnimada in Java uu ku jiro booskiisa iyada oo la tixgelinayo luuqado kale oo ku yaalla deegaanka juqraafiyeed. Xaaladdan waxaan doonayaa inaan ka hadlo mid ka mid ah koorasyada aan ku qaato habeenka firfircoonkayga; isku mid ayaa ii adeegaya wax badan si loo raaco horumarinta qalab xiiso leh ...
Baridda CAD / GIS, Internet iyo Blogs
AutoCAD Casharrada video, lacag la'aan ah 7 maalmood
Tani waa fursad aan cidna ka maqnaan. Si ku-meelgaar ah, ilaa September ugu dambeyn 2011 CADLEarning waxay soo bandhigtay kuuboon kuugu soo galeysa kaas oo aad gali karto inta lagu jiro maalmaha 7 dhammaan ilaha la heli karo. CADLearning waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee ay ansixisay AutoDesk si loo horumariyo buugaagta iyo koorsooyinka ...
Maqaalkani waxa uu ku salaysan yahay soo jeedinta ah ee Barcelona FOSS4G ee September 2010 by: Iraklis Karampourniotis iyo Ioannis Paraschakis - Aristotle University of Thessaloniki Zoi Arvanitidou - University of The Aegean i soo xiri waxa dhacay Gabriel Reyes, iyo waxay ku salaysan tahay su'aasha, haddii ...
Waxaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu habboon ee nidaamka nidaaminta ee ku jira bii'ada Spanish-ka ee ku hadasha mawduuca geocaatka ah. Uma haysato dukumiintigan gacanta waa dambi; Aynu sheegno inaan iska indhatirin mashruuca ka hor inta aan akhriyin maqaalkan Geofumadas. Waxay u badan tahay in sheyga sida ...
5 daqiiqado kalsooni loogu talagalay blog Matías Neiff
GIS, qoraalka iyo Mac waa isku-dabiici dabiici ah oo ku yaal blog-ka oo aan go'aansaday inaan ku taliyo, sababtoo ah waxay i siisay farxad badan oo aan ku helo. Akhriso sababaha loo soo galo blogkan waxaa ay naga dhigeysaa in aan fahanno sababta ay uga tagtay ereygii hore ee Wordpress, iyada oo aan lahayn badhanka Home iyo url yar ...
Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, Internet iyo Blogs, aragti ugu horeysay
Koorsooyin cusub oo e-waxbarasho Kooxda DMS
Iyada oo ku qanacsanaanta weyn waxaan ogaaday in DMS Group ayaa la bilaabay koorsooyin cusub oo ku saabsan e-barashada madal, sidaas darteed waxaan ka faa'ideystay meel bannaan oo si kor loogu qaado qiimaha ay keeni adeegyadan bulshada geospatial. DMS Group takhasusay shirkadda kaabayaasha dhaqaalaha Data iyo Geographic Information Systems astaanta bilawday koorsooyin cusub tababarka ...
Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, GvSIG
Yaa doonaynin koorso bilaash ah oo internetka ah oo lagu magacaabo AutoCAD-ka ah ... Gaaban, ma jiraan wax la mid ah kooras rasmi ah oo lala yeesho macallin wanaagsan si uu u barto AutoCAD. Laakiin ikhtiyaarka aan doonayo inaan muujiyo ayaa iga tagay waxoogaa yaab leh, iyada oo la tixgelinayo in AutoCAD 2012 aysan soo gaarin waqti hore. Tani waa koorsada AutoCAD 2012 kor u qaadeysa ...
Waxaan ku qanacsannahay inaan ku qanacsanahay fursada loo soo bandhigay CONTEFO ee codsiyada koorsooyinka bilaashka ah ee 10. CONTEFO oo la kaashaneysa ururka gvSIG wuxuu bixiyaa kobcin toban koorso bilaash ah heerka User. Koorso u dhigma shahaadada aqoonsiga "User Level" oo leh mudo ah 60 ...
Waxbarashada AutoCAD ma ahan marmarsiiyo waqtiyadan isku xirnaanta. Hada waxaa suurtagal ah in la helo buugyada leh fiidiyowyo gebi ahaanba bilaash ah. Doorashadan oo aan ku tusi doono inaad tahay midka ugu fiican ee lagu baran karo AutoCAD si fudud. Waa shaqada Luis Manuel González Nava, oo ah version in uu jiray ...
Laga soo bilaabo 1 ilaa 3 ee Diseembar lixda bilood ee shirarka gvSIG ayaa lagu qaban doonaa Valencia. Dhacdadani waxa ay waa xeeladaha fiican oo joogto ah in ururka uu riixay inuu software jiritaanka in la yaab ay ku iman kara in lays caalamiga ah ee suuqa. Waxoogaa yar, wax yar ...
Boggii hore Page 1 ... Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 ... Page 9 page Next